Ifilimu lezocansi - Wikipedia
Kusethi yefilimu yezithombe zocansi ngaphambi kwe- "action"
'Amafilimu nobunja '(Pornos), amafilimu zocansi, noma ubulili amafilimu kukhona amabhayisikobho samanje ucansi okubeka obala nodaba ukuze sivuse futhi ukwanelisa umbukeli.Amafilimu ezithombe zobulili ezingcolile aveza amaphupho ezocansi futhi imvamisa afaka izinto ezikhuthaza inkanuko efana nobunqunu (i- softcore ) nokuya ocansini (i- hardcore ).Kukhona umehluko ngezinye izikhathi wenza phakathi "esikisela ucansi" futhi "izithombe zocansi" namafilimu ngesisekelo ukuthi isigaba yokugcina iqukethe ocace kakhulu ubulili, futhi izogxila kakhulu ukuqhanyelwa kuka leticocwako; umehluko wehlise kakhulu.
Abasebenzi nabalingisi kwifilimu yezithombe zocansi ehlelwe e-Australia
Amafilimu ezithombe zobulili ezingcolile ngokuvamile ahlukaniswa njengezithombe zocansi ezithambile noma ezinzima.Ngokuvamile, izithombe zobulili ezingcolile ezithambile yizithombe zobulili ezingcolile ezingakhombisi ucansi olucacile, ukungena ngokocansi noma fetishism ngokweqile.Ngokuvamile iqukethe ubunqunu noma ubunqunu obuncane ezimeni eziyela ngasocansini. Izithombe zobulili ezingcolile ze-Hardcore yizithombe zocansi ezibonisa ukungena noma izenzo ezimbi kakhulu zobufazi, noma zombili.Iqukethe imidwebo yezocansi nokungena okubonakalayo.Umsebenzi wezithombe zobulili ezingcolile ubonakala njengolukhuni uma unokuqukethwe okuqinile.
Amafilimu ezithombe zobulili ezingcolile ngokuvamile ahlukaniswa abe izigaba ezingezansi ezichaza imicabango yezocansi ifilimu nabalingisi abazama ukuyidala.Ama-subgenres nawo angahlukaniswa abe yizici zabadlali noma uhlobo lwezenzo zocansi eligxila kulo hhayi emakethe lapho isizinda ngasinye sikhanga khona.Izinhlobo ezingaphansi ngokuvamile bavumelane ezithile yesigodi, futhi ngamunye angafaka isikhalazo ezilalelini ezithile.
"https://zu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ifilimu_lezocansi&oldid=95824" تان ورتل
Leli khasi laqeda ukuhlelwa ngo-27 uMbasa 2022, nge-17:08.